Qala electronics mobile IPhone X
I-Apple ine-flagship yayo entsha, i I-iPhone X wathunyelwa emncintiswaneni. Kodwa ingabe igcina isithembiso sayo noma ngabe isimemezelo siphelele kakhulu? Yini okusha? Kuyinto nakanjani i-iPhone X ngenani eliphezulu kunazo zonke. Yazi lapha namhlanje.
1 I-iPhone X isebenza kanjani?
2 Umklamo omusha - idivayisi engapheli!
2.1 Ikhamera ku-iPhone X
3 I-iPhone X - Idivayisi engadingi amaphasiwedi
4 Yenza okuhle ku-Hombutton ku-iPhone X!
5 Ingabe i-ID ye-Face isebenza njengokuthenjisiwe?
6 I-unicorn ikhuluma ku-iPhone X.
7 Izinsiza: Amandla amaningi we-computing ahlanganiswe nokushaja okungenantambo
8 I-Toy Tester ine-iPhoneX
9 Isiphetho: I-iPhone X yavuselelwa kabusha
I-iPhone X isebenza kanjani?
Elisha I-iPhone X Isigaba esengeziwe sibhekene nokuqashelwa ubuso, isibonakaliso esikhulu kanye ne-emojis ephathekayo. I-iPhone X entsha entsha yayimangalisa ekuvivinyweni kodwa nokho kuphela ukukhetha kwabalandeli be-Apple abasebenza ngokuphelele.
Ikusasa le-smartphone yesimanje, njengoba abanikazi be-Apple babecabanga, baqala ngenhlangano yokunyakaza kwekhanda echaza umbuthano, ejika ikhanda layo kabili. Khona-ke imibiko ye-smartpone "I-Face ID yenziwe" esikrinini sayo. Ngakho-ke ukuqinisekiswa kobuso bakhe kuye kwasungulwa. Kusukela manje, i-smartphone izovulwa kuphela uma ibanjwe esandleni somsebenzisi futhi ikhonjiswe ngokubukeka okujulile ngekhamera ye-infrared.
Okokuqala, qaphela: Yiqiniso, lokhu kusha I-iPhone X (ithi: "10", hhayi "x") yekhwalithi. Yiqiniso futhi kuyabiza. Noma kunjalo, ingabe ifoni okufanele isivele isenqoleni yokuthenga namuhla? Ibiza cishe nge-1149 EUR ngekhanda le-64 GB futhi lizungeze i-1319 EUR nge-256 GB. Futhi njengoba kukhona inkulumo yedivaysi ebonakala ibonakale yincipha emva kokuhlolwa kokuqala, noma i-splinters kalula, udinga ukuvikelwa okwengeziwe. Uhlelo lwe-Apple Care lwakuthola i-229 EUR, ikhava yokuvikela iyabiza kakhulu.
Umklamo omusha - idivayisi engapheli!
I-Apple inkampani iqhubeke I-iPhone X ivuselele umklamo nxazonke. Benza cishe i-smartphone engenamkhawulo futhi bayifake nge-chip enamandla kakhulu nezinzwa ezengeziwe. Esikhathini sokubonisa esinakho I-iPhone X Amasentimitha angu-5,8 futhi ngaleyo ndlela enkulu kakhulu. Ngokuqhathanisa, ukuboniswa kwe-iPhone X 8 Plus enkulu kakhulu, eyinkimbinkimbi kuphela imilinganiselo engu-5,5 amasentimitha kuphela. Idivaysi ingaphansi kwamahora we-24 ukubalwa ngokushaja kwebhethri elilodwa ngaphandle kwamahora angu-8 okulala.
Manje i-Apple isifake esinye seziboniso ze-OLED ku-iPhone X, lapho amaphikseli amnyama empeleni ehlala emnyama futhi engakhanyiswa. Lokhu kukunikeza umehluko omkhulu, iphuzu elinomphumela omuhle kuma-movie, futhi ibhetri lihlala isikhathi eside. Uma ulandela ochwepheshe, ke u-Apple unakho I-iPhone X isibonisi esiphezulu kakhulu esakhiwe ngaphakathi, okwamanje sikhona efonini ephathekayo.
Ikhamela ku I-iPhone X
Ikhamera okwamanje iyona engcono kakhulu emakethe. Imodi ye-Selfie ikuvumela ukuthi udonsa ama-portra nomphumela we-bokeh obangele isizinda. Izimo zokukhanyisa zihlaziya idivayisi ngesikhathi sangempela. Ngakho-ke, ubuso bungabonakalisa ezithakazelisayo, ngesikhathi esisodwa isizinda sishaywe ngokuphelele. Lokhu kuyamangalisa - uma kusebenza: Ngakho-ke omunye uyama esiteji futhi ukhanyiswa ukukhanya.
Ikhamera yokubuka engemuva (12 Megapixel) inikeza izithombe zekhwalithi efanayo nalezo ze-iPhone X 8 (Plus), okwenza kube yinto engcono kakhulu emakethe. Ebusuku, izithombe ezishesha umbala neziphezulu ziphumelela. Ama-telelens ane-zoom ye-2x ane-f / 2.4 f-stop kuphela esikhundleni se-f / 2.8. Lokhu kusho ukuthi ezimweni ezinzima, uzothola izithombe ezingcono. Kokubili ama-lens manje anesimo se-optical stabilizer, okufanele sinciphise ukuzwakalisa ikhamera. Ibhulogi yezithombe "Ama-Fstoppers" alayishe ividiyo ku-Youtube ngokuthatha imidwebo yevidiyo ye- I-iPhone X kuqhathaniswa ne-Panasonic GH5 ebiza i-2000 US Dollars. Isiphetho: I-iPhone X iyamangalisa.
Amavidiyo wokuhamba kancane aqoshiwe nge-240 ngomzuzwana angabhalwa ngekhwalithi ephelele ye-HD. Amavidiyo we-4K manje angathunyelwa esebenzisa i-60 esikhundleni se-30 ozimele ngomzuzwana. Lokhu kwenza iziqeshana zibukeke zilula. Kubalulekile ukwazi ukuthi i-4K60FPS isebenzisa ama-megabyte angu-400 wevolumu ngomzuzu. I-movie evamile egcwele ye-HD idla i-90 MB kuphela ngomzuzu.
I-iPhone X - Idivayisi engadingi amaphasiwedi
Okuthakazelisayo kakhulu, noma kunjalo, ukuqaphela ubuso kwe I-iPhone X, Wonke umuntu I-iPhone X befuna ukuthatha masinyane isandla ukuze ubone indlela ye-ID ye-Face isenzo. Ubunikazi be-Face bungcono kakhulu ukuqonda umbono we-Apple. Le nqubo isebenza ngezinzwa ezimbili ze-infrared ezakhelwe ngaphakathi kokubili izithombe ze-2-D futhi ngesikhathi esifanayo zakha imodeli ye-3-D yobuso bomnikazi. Isibonelo se-2-D sidalwa ngokusebenzisa amaphuzu angaphansi kwe-30 000 avela esikhumbeni somsebenzisi. Lesi sithombe siguqulwa sibe yinani lamanani futhi sigcinwe kwi-smartphone yangakini, endaweni ephephile ikakhulukazi.
Kubasebenzisi abaningi, ubuqili lobuchwepheshe nemininingwane ayikhathazi ngempela. Bathola imizwa yabo ebaluleke kakhulu: uzizwa kanjani ngabo manje? Impendulo ilula njengokungathi kwakungakaze kube khona amaphasiwedi. Ubuchwepheshe buyanyamalala ngemuva, akukwazi ukukhululeka okwamanje. Ekugcineni, idivayisi evikelekile kahle I-iPhone X lapho konke okwenziwe khona ukuyeka ukucasula umsebenzisi ngokuthayipha amaphasiwedi. Iyini inothi engxenyeni engenhla yeskrini. Ukubuka okuhle "akusikho". Kodwa kule iPhone X Monobraue isici esincane sokubulala: "Ikhamera ye-TrueDepth" entsha, lapho idivayisi ivuliwe khona.
I-Apple ibize lesi sici i-ID ye-Face. Lokhu akuyona nje ukuqashelwa ubuso okulula okungahle kuvezwe ngesithombe esisodwa, njengoba kungenzeka kumadivayisi amaningi we-Android. Kunalokho, imodemu ye-infrared eyinkimbinkimbi isebenza nekhamera. Uma ikhodi enqunywe ifana nobuso obuvele bugcinwe, i-smartphone ivuliwe. Ngenxa yobuchwepheshe be-infrared, kusebenza ngisho nasebumnyameni. Konke kwenzeka ezinxenyeni zomzuzwana. Ukusetha kwe-ID ye-Face ikakhulukazi enembile futhi ikakhulukazi ngaphansi kweminithi sekuqedile kakade. Ngokwenza kanjalo, umsebenzisi kufanele ajikeleze ikhanda lakhe izikhathi ezingu-2 emininingwaneni yesithombe esinqunyiwe, njengokungathi ulandelela umbuthano ngendwangu yakhe yekhala. Khona-ke yilokho.
Yenza okuhle ku-Hombutton ku-iPhone X!
Le divayisi cishe ingenamkhawulo. Ithimba le-Apple lisusiwe lapha Inkinobho Yasekhaya, lapho uhla lwezinyathelo zonke olulawulwa ngaphakathi kwe-smartphone. Nasi, isibonelo, ukuvula usebenzisa isithwebuli somunwe. Ukunyakaza okusheshayo okwakusanda kusungulwa, ngezinye izikhathi ukunyakaza okuvusa amadlingozi kokuhamba kungafundiswa kalula futhi ngokushesha. Kuvidiyo engezansi ungabona izici zomuntu ngamunye.
Ingabe i-ID ye-Face isebenza njengokuthenjisiwe?
Abanye bazibuza umbuzo: Ingabe i-Face ID iyasebenza futhi ikhangiswa? Yebo, emva kwamakhulu emilingo egijima - enezingubo ezihlukahlukene ezifana nezibuko zelanga, i-cap, i-wig, ebumnyameni - ungatshela ukuthi: Yasebenza ngokuthembeka futhi okungenani kakhulu. Umbono ongavinjelwe we-iPhone X uvula idivayisi ngomzuzwana. Ngemuva kwalokho, kubalulekile ukuswayipha umunwe wakho kusukela phansi kuya phezulu ukuze ufike esikrinini sokuqala nazo zonke izinhlelo zokusebenza. Iphuzu elingadingekile, ngakho-ke i-Apple ifuna ukuvimbela izindaba ezingaphuthelwa.
Nokho, ngezinye izikhathi ubuchwepheshe bufinyelela emikhawulweni yayo. Isofthiwe ye-ID ye-Face ngezinye izikhathi inezinkinga ezivela ekhoneni elihle kakhulu, njengoba kunjalo uma i-smartphone isondele kakhulu noma ikude kakhulu nobuso ngaphezu kwengalo yesandla. Sekuvele kushintshwe okukhulu kwe-optical okwanele ukuthola i-algorithm ngaphandle kwejwayelekile. Uma unesikhala phambi komlomo wakho nekhaleni noma uma uhlamba intshevu yakho egcwele, iphasiwedi kufanele ifakwe. Uma i-ID ye-Face yolungile, enwetshiwe yidatha erekhodiwe kumodeli we-3D asevele agcinwe. Njengoba ukuqashelwa kobuso obakhelwe ngaphakathi kuhlanganiswe nenethiwekhi ye-neural adaptive, i-Face ID iba yinkimbinkimbi ngokwengeziwe, kusho u-Apple.
Yonke idatha ye-ID ye-Face ayigcinwa efwini, kodwa ihlala igcinwe efonini. I-Face ID nayo isebenza ngaphandle kokuxhumeka kwe-intanethi esebenzayo. Ngisho nezici eziningi zokuphepha ID ye-ID ayiyona ephelele. Labo "i-Wall Street Journal" bahlukumeza le nqubo nge-pair of triplets efanayo. Yiqiniso lokhu kuyinto engavamile, kodwa abaduni emhlabeni wonke bazama ukukhipha uhlelo noma ukuphazamisa izinyathelo zokuphepha ezikhona. Esikhathini esilandelayo sizobonisa ukuthi ukuphepha kwe-ID ye-Face ngempela kunjani.
I-unicorn ikhuluma ku-iPhone X.
Ubuchwepheshe be-unicorn abusetshenziswanga yodwa lapho uvula i-smartphone. Izinhlelo zokusebenza ezinesidingo esibucayi futhi esidinga ukuqinisekiswa okungeziwe ngokusebenzisa i-ID ye-Touch, manje uthole ukufinyelela ikhamera ye-TrueDepth. Lezi yizinhlelo zokusebenza zebhange, izinhlelo zokusebenza ezihlukahlukene zekhaya ezihlakaniphile: njengezingcingo zokuphepha kusuka ku-Arlo noma umphathi wephasiwedi iPassword. I-alamu ibeka ngokuzenzekelayo uma i-iPhone X ithola ukuthi ubheka. Ifoni ibuye ijubane ngokushesha kokubekwe eceleni, uma ungayibheki ngokuqondile - ukugcina amandla. Imilayezo engenayo ibonisa idivayisi ekubonisweni ukuvikela ubumfihlo uma umsebenzisi we-smartphone ebukeka ekubonisweni. Lena yonke imisebenzi ehlakaniphile ehlanganisa induduzo kanye nesebenzisane ngomunye nomunye.
Kukhona futhi i-Animojis: Ngabo, abasebenzisi bangakwazi ukuthumela isimo sabo sobuso ngokuqondile nangesikhathi sangempela eziningana ezinkulu ze-emoji, kusukela ku-unicorn kuya ekubulaweni. Ngemuva kwalokho ungathumela izithombe ezincane: thumela kubangani, isibonelo, nge-iMessage noma ngesimo sefayela levidiyo nge-Whatsapp ne-Co. Kungakhathaliseki ukuthi leli gimmick lithatha lingakabonakali yini, kodwa lihlekisa. Kwabaningi, umsebenzi usuvele usuyinto engcono kakhulu entsha I-iPhone X kufanele anikele.
Izinsiza: Amandla amaningi we-computing ahlanganiswe nokushaja okungenantambo
Imishini esele ye I-iPhone X ngokuyinhloko kufana namamodeli we-8er. Iprosesa ye-A11 ye-Bionic eyakhelwe ngaphakathi okwamanje iyona esheshayo engayithola. Kunoma yikuphi, ubamba isibalo esihle kuma-benchmarks - izinhlelo ezikhethekile zokuthola ukusebenza: eGeekbench, wathola amaphuzu angaphezu kokuphindwe kabili njengabancintisana nabo kwezinye izindawo. I-iPhone Xs entsha njengamanje i-Smartphones esheshayo emakethe.
Das I-iPhone X ingahlawuliswa ngaphandle kwezintambo futhi ingahlawuliswa nazo zonke iziteshi zokushaja ze-Qi ezitholakalayo emakethe - kufaka phakathi lezo ezivela efenini ye-IKEA ne-IKEA izibani. Inqubo yokushaja ithatha isikhathi eside kunokudinga kwikhebula. Kodwa lokhu akudingeki ukuba kufakwe ikhebula futhi. Ukuphila kwebhethri uthi i-Apple yimizuzu emibili ngaphezu kwalokho kuyi-iPhone X 7. Lokhu kuyiqiniso: ekupheleni kosuku "ngokujwayelekile" ukusetshenziswa, cishe amaphesenti angu-40 webhethri ahlala. Ngakho ungakwazi kalula ukufika ngosuku, kodwa izinsuku ezimbili ezingenawo ugesi angeke zenzeke.
I-Toy Tester ine-iPhoneX
Ngisho nezincane kakhulu sezivele zine-iPhoneX. Unyaka we-4 ubudala Toy Tester usuvele usule i-iPhone futhi uyisebenzise imisebenzi yakhe ye-Youtube.
Isiphetho: I-iPhone X yavuselelwa kabusha
Nge I-iPhone X E-Apple, umlingo wamadivayisi wangaphambilini ubuya. Ibhalansi ephelele kulabo abafuna ukuba neskrini esikhulu, kodwa futhi i-8 plus ibonakala inamandla kakhulu. Amakhamera akhiwe kuwo yiwona angcono kakhulu emakethe njengamanje, aze afinyelele ku-256 Gigabyte yesitoreji, la madivayisi ngeke aphume isikhala. Naphezu kwenkinobho yekhaya engekho ewela ukusebenza komsebenzisi. Isikrini esisha se-OLED sibheka okuhle, i-Face Unlock ID ye-Face isindlela ethakazelisayo kakhulu. Isebenza ngokumangalisayo ngendlela yokusebenzisa nsuku zonke. Ishintsha kakhulu indlela esihlangana ngayo nefoni yethu ephathekayo. Future iPhone X izizukulwane ngokuqinisekile bayozuza ubuchwepheshe. Kukhona izinkinga ezimbalwa zokucindezela ukulapha lapha. Kodwa i-ID ye-Face idinga kuphela isikhathi esengeziwe sokusebenza kangcono - lokhu kuzoletha ukuhlolwa kwesikhathi eside ukukhanya.
Isiphakamiso sokuthenga okuzenzekelayo asikwazi ukuthi idivayisi noma kunjalo. I-1149 Euro (64 GB) ne-1319 Euro (256 GB) lokhu I-iPhone X idivayisi ebiza kakhulu futhi njengamanje phakathi kwama-smartphones abizayo kakhulu. Kungakhathaliseki ukuthi udinga ubuso ukuvula neskrini esikhulu ku-300 Euro inkokhelo noma ukhetha ukungasebenzisi i-iPhone 8 (Plus) kakade eshibhile, wonke umuntu oyedwa kufanele azikhethele yena. Ngenxa yokuthi ikhamera, iprosesa, ubuchwepheshe beselula kanye nokucubungula akunakuhlukaniswa nezehluko. Amadivayisi afanelana nomncintiswano wesistimu yokusebenza ye-Android asevele aqala ku-500 EUR ukuthenga, isibonelo I-Galaxy S8, Lezi azisebenzi ne-Apple ecosystem. Futhi ishaja kufanele ithengwe ngaphezu kwalokho.
Isihloko sangaphambiliniIzindiza ezilawulwa kude
Isihloko esilandelayouwoyela kakhukhunathi